प्रकाश दाहालले स्वर्गबाट पठाएको एउटा अनौठो–पत्र नेपालीका नाममा ! - Tanahu Post
प्रकाश दाहालले स्वर्गबाट पठाएको एउटा अनौठो–पत्र नेपालीका नाममा !
परमआदरणीय नेपाल आमा र नेपाली आफन्तहरु,
तमाम कमजोरीहरुलाई आर्यघाटमा खरानी बनाएर आएँ म यो अलकापुरीमा । यतिखेर आफ्नै दिदीको न्यानो काखमा छु । यति छिट्टै भीसा लाग्ला भनेर सोचिएन, कसले पो सोच्छ र ?
म एउटा सामान्य मानिस, तर असामान्य जीवन ज्यूँने परिबन्धमा पारिएँ । सफाइमा अब भन्नु केही छैन, किनकि मेरो ‘अनन्य यात्रा’ नै सबैभन्दा ठूलो ‘डिटरजेन्ट’ भएको हुनुपर्दछ ।
मानव सभ्यताको विकासको क्रममा युद्ध कहाँ भएन ? यसो भनेर म युद्धको वकालत गर्नतिर लागेको होइन । मेरो पिताश्री, जो ‘राजकृष्ण कँडेल’जस्ता पवित्र तर कडा गुरूको शिष्य हुनुभयो, बहुत सरल र इमान्दार नागरिक हुनुहुन्छ । बडो भावुक हुनुहुन्छ ।
‘छविलाल–पुष्पकमल हुँदै प्रचण्ड’सम्मको रुपान्तरणमा उहाँलाई संसारले कसरी बुझ्यो ? हामीलाई कसरी बुझ्यो ? यो संसारको लीला अपरम्पार ! हो, हामी पूरै परिवार जनयुद्धमा होमियौँ । त्यो जनयुद्ध अनिवार्य थियो ? कि कसले भड्कायो हामीलाई ? के हामी गन्तव्यसम्म पुग्न सफल भयौँ ?
तमाम शहीदहरुको शहादत सार्थक भयो त ? पञ्चायतकालमा भन्दा यो २८ वर्षमा आमनेपाली जनताले राहत अनुभूत गरे त ? दोषी हौँ हामी ? अपराधी वा आतयायी हौँ हामी ? नेपाली समाजमा अन्याय छैन ? अत्याचार छैन ? भ्रष्टाचार छैन ? छुवाछूतको अन्त्य भएको छ ? समाजमा विभेद छैन ?
बाबुराम अंकलको ज्ञानले बाटो बिराएझैँ हो त ? हामीमाथि पटक–पटक अनेक आरोप लगाइयो ? ‘प्रचण्डपुत्र’ र ‘प्रचण्डपुत्री’ भनेर खेदो खनियो ।
तर हामीले ज्यानको बाजी लगाएर परिवर्तनका लागि गरेको बलिदानलाई न्यूनीकरण गरियो । म कति तनावमा रहेँ भन्ने कुरा मलाईमात्र होइन, म नजिक आउने मेरो दमालीहरु सबैलाई थाहा छ ।
‘प्रकाश’ नाम भएर पनि उज्यालो जीवन ज्यूँन नपाएझैँ भयो । बहुत शक्तिशालीझैँ देखिने हाम्रो परिवार एक एक गर्दै ‘अकाल–काल–ग्रास’ हुन पुगियो । भनिएला ‘लाखौँ मानिसको मन दुखाएको यो गरेको, त्यो गरेको, १७०००, १७०००, १७००० ….. उफ……. के नेपालमा आजसम्म जति नेपाली अकालमा ज्यान गुमाउन पुगे त्यसको कारण जनयुद्ध र कमरेड प्रचण्डमात्रै हुन् ?’ Source:Tattato Khabar
अच्चम्म लाग्दो बानि यी अभिनेत्रीको सुन्दा पनि लाजले मुख छोप्नु पर्ने
Prevएकाएक राष्ट्रपतिले लिइन् ‘बोल्ड’ निर्णय, अब कता जाला देशको राजनीति ?
Nextयिनै हुन चर्चामा आउन नचाहने प्रचण्डका ‘जेठा छोरा’ सागर !
अच्चम्म लाग्दो बानि यी अभिनेत्रीको सुन्दा पनि लाजले मुख छोप्नु पर्ने (48)
अचम्मको मन्दिर जहाँ प्रसाद खाँदा ११ जनाको मृत्यु, सहित पंक्षीहरु पनि मरे (46)
ति भी प्रस्तोताको नाकबाट रगत बगिरहदा समेत टिभिको लाइभ राकिएन ! [कारण थाहा पाउनु भयो भने बेहोस हुनुहुनेछ (41)
यसरि धुमधाम संग भारतीय चर्चित कमेडियन कपिल शर्माले गरे विवाह हेर्नुहोस तस्बिरहरु (38)